हाइपरसोनिक मिसाइलहरू के हुन् ? किन हुन्छन् खतरनाक ?
२०७८ माघ १२ बुधबार / Wednesday, January 26, 2022
साहित्य र कला
२०७८ पौष २९ बिहीबार
काठमाडौँ । उत्तर कोरियाले देशका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनको निगरानीमा अर्को हाइपरसोनिक मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको जनाएको छ । उत्तर कोरियाको आधिकारिक समाचार एजेन्सी केसीएनएका अनुसार मंगलबार क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिएको थियो र उक्त क्षेप्यास्त्र एक हजार किलोमिटर टाढा आफ्नो लक्ष्यमा खसेको थियो । यो अत्यन्त उच्च गतिमा हान्न सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल भएको बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाले तेस्रो पटक ब्यालेस्टिक मिसाइलको तुलनामा राडारको नजरबाट बच्न सक्ने क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको बताइएको छ । किमको नयाँ वर्षको भाषण पछि एक हप्ता भित्र, देशले दुईवटा शक्तिशाली मिसाइल परीक्षण गरेको छ ।
गत वर्षको नोभेम्बरमा चीनको आकाशमा रकेटजस्तो केही अति तीव्र गतिमा उडिरहेको देखिएको थियो । लगभग पूरै पृथ्वीको परिक्रमा गरेपछि, यो आफ्नो लक्ष्य भन्दा लगभग ४० किलोमिटर तल खसेको बताइएको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो नयाँ प्रकारको हाइपरसोनिक मिसाइल थियो, यद्यपि चीनले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । तर यो पनि सत्य हो कि ध्वनिको गति भन्दा धेरै गुणा छिटो चल्ने क्षेप्यास्त्र अमेरिका, चीन र रुसबीचको हतियार दौडको कारण बनेको छ ।
अब यो दौडमा उत्तर कोरिया पनि सामेल भएको छ ।
हाइपरसोनिक मिसाइलहरू के हुन् ?
अस्ट्रियाको रक्षा मन्त्रालयमा काम गरिसकेका र हाल विदेश मामिलासम्बन्धी युरोपेली परिषदमा वरिष्ठ नीति फेलो डा गुस्ताभ ग्रेसेलले बिबिसीसँग हाइपरसोनिक मिसाइलका बारेमा बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्:
युद्धको इतिहास हावामा फ्याँकेर आक्रमण गर्ने जत्तिकै पुरानो भएको बताउदै पहिलेको जमानामा ढुङ्गा वा फलामका गोला हान्नका लागि ठूला-ठूला गुलेल र तोप जस्ता हतियारहरू थिए । इन्जिन जडान गरेर धेरै शक्तिका साथ चीजहरू टाढा फाल्न सक्ने अनुभूतिले मिसाइल प्रविधिको जन्म गर्यो। यो प्रविधिलाई जर्मनीले सन् १९३० मा थप सुधार गरेको थियो ।
रकेट वा मिसाइल टेक्नोलोजीको विकास जर्मनीको इचस्वेहर आर्मीको युगमा भएको थियो । जर्मनीले नयाँ हतियार बनाउन खोजेको थियो । यसका लागि हजारौं वैज्ञानिकहरू जम्मा गरे र यस प्रविधिसँग जोडिएका अधिकांश इन्जिनियरिङ अवरोधहरू हटाइएको थियो । पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यमा भएको भर्साइलको सन्धिले जर्मनीलाई वायुसेना र सैन्य प्रविधि विकास गर्न निषेध गरेको थियो। तर रकेट टेक्नोलोजीको बारेमा केही भनिएन किनभने यो प्रविधि त्यतिबेला विकसित भएको थिएन । जर्मनीले यसमा काम गर्न थाल्यो र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्म नयाँ हतियार बनायो ।
पेइनेमुन्डे भनिने ठाउँमा जहाँ पेइने नदी बाल्टिक सागरसँग मिल्छ, जर्मनीले संसारको पहिलो सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा आधुनिक हतियार अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गर्यो । यस ठाउँबाट उसले ४०० किलोमिटरको परीक्षण दायरा प्राप्त गर्न सक्छ । जर्मनीले दुई धेरै फरक अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यो, भि-१ र भि-२, जस अन्तर्गत छोटो दुरी र लामो दुरीका क्षेप्यास्त्रहरू बनाइयो । दुवै पूर्णतया फरक प्रकारका हतियारहरू थिए । तिनीहरूलाई प्रतिशोध हतियार भनिन्थ्यो । त्यहाँ बमहरू थिए वा, भन्नुहोस्, उड्ने बमहरू थिए जुन भि-१ जेट इन्जिनको मद्दतले टाढा फ्याँक्न सकिन्छ । तिनीहरूलाई क्रूज मिसाइलहरूको पुर्खा भन्न सकिन्छ । ध्वनिको समान गति भि-२ लामो दूरीको मिसाइल थियो । तर, दुवैमा कमजोरी पनि थिए । भि-१ चाँडै अत्याधिक तातिने र आफ्नो बाटो बिराउने किसिमको थियो । हिटलरले भि-२ मा त्रुटिको कारणले यसलाई अमेरिका विरुद्ध प्रयोग गर्न कहिल्यै सक्षम भएनन् ।
यसको गाईडिङ टेक्नोलोजी त्रुटिपूर्ण थियो, रेन्ज बढ्यो भने टेक्नोलोजीले सपोर्ट गर्दैन र लक्ष्य हराउने खतरा रहन्छ । न्युयोर्कमा आक्रमणका लागि क्षेप्यास्त्रको साइज बढाउनुपर्ने थियो र यो लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्षम हुने थियो । यसले जर्मन सेनाको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । युद्धको समयमा, जर्मनीले लन्डन, एन्टवर्प र पेरिसमा मिसाइल आक्रमणहरू सुरु गर्यो, तर यसले युद्धको पाठ्यक्रम परिवर्तन गरेन। पछि, यी परियोजनाहरूमा काम गर्ने वैज्ञानिकहरू हतियार अनुसन्धान र अन्तरिक्ष मिसनहरूमा काम गर्न अमेरिका र सोभियत संघ गए । दुवै देशले आफ्नो सेनाको शक्ति बढाउन मिसाइल प्रविधिमा सुधार गर्न काम गरेका छन् ।
जर्मनीका यी दुई हतियार आजका क्रुज र ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन् । क्रुज मिसाइलहरू पृथ्वीको सतह नजिकै उड्छन् र छोटो दूरीमा प्रहार गर्छन्, जबकि ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू वायुमण्डलबाट बाहिर जान्छन् र हजारौं किलोमिटर टाढाको लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छन् ।
म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा रिसर्च फेलो रहेकी डा. लौरा ग्रेगोले बिबिसीसँग भनेकी छन्:
मिसाइलले लक्ष्यमा सही प्रहार गर्न र शत्रुबाट लुक्न वायुमा आफ्नो गति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलहरू यो गर्न सक्षम छन् । उनीहरूले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गर्न एरोडायनामिक बल प्रयोग गर्न सक्छन् । तिनीहरूको आकार विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको छ ताकि तिनीहरू वायुमण्डलमा अत्यन्त उच्च गतिमा हिंड्दा माथि र तल वा बायाँ र दायाँ घुम्न सक्छन् । यो क्षमताले उसलाई दुश्मनको आँखाबाट लुकेर आक्रमण गर्न मद्दत गर्दछ । यद्यपि लौरा भन्छिन् कि मिसाइल ट्र्याक गर्न गाह्रो छैन ।
यी क्षेप्यास्त्रहरूले प्रकाश मात्र प्रतिबिम्बित गर्दैनन् तर ताप उत्पन्न गर्ने र सेन्सरहरूले पनि पत्ता लगाउन सक्छन् । ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पत्ता लगाउन अमेरिका र रुसले अन्तरिक्षमा इन्फ्रारेड सेन्सरसहितको स्याटेलाइट प्रणाली बनाएका छन् । ताप र प्रकाशको कारणले इन्फ्रारेड प्रणालीहरू पत्ता लगाउन सक्छन् । तिनीहरूको सम्पूर्ण बाटो पत्ता लगाउन सक्छ । क्षेप्यास्त्रको गति खस्नु अघि सुस्त हुन्छ । त्यसपछि तिनीहरू रडारमा पनि देख्न सकिन्छ ।
हाइपरसोनिक मिसाइलले दुश्मनको नजरबाट लुकाउन सक्छ भन्नु गलत हुनेछ । तर यी मिसाइलहरूले क्रुज मिसाइलहरूको ठूलो कमीलाई पार गर्न सफल भएका छन् । वातावरणमा हावासँगको घर्षणले क्षेप्यास्त्रलाई धेरै तताउँछ र तापक्रम कम गर्न यसको गति घटाउनुपर्छ । हाइपरसोनिक मिसाइलहरू यस अवस्थामा राम्रो हुन्छन् किनभने तिनीहरूले आफ्नो बाटोको ठूलो भाग वायुमण्डलबाट बाहिर निकाल्छन् ।
केही देशहरूले ती क्षेप्यास्त्र छिटो भएकाले बनाइरहेको दाबी गर्छन् । तर प्राविधिक रूपमा यो गलत हो । ब्यालेस्टिक मिसाइलहरू उनीहरूसँग मेल खान सक्छन् । उनीहरूले लुकेर आक्रमण गर्न सक्छन् भन्ने दाबी गर्नु पनि गलत हो । तिनीहरूको बाटो रिलिजबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । हावामा आफ्नो दिशा परिवर्तन गर्दा आधुनिक मिसाइलहरू पनि यो काम गर्न सक्षम छन् । अर्थात्, हाइपरसोनिक मिसाइललाई मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीबाट उम्कन गाह्रो हुन्छ ।
हाइपरसोनिक हतियार दौड
फ्रान्स, भारत, जापान, चीन र अष्ट्रेलिया हाइपरसोनिक प्रविधिमा काम गरिरहेका छन् । तर अमेरिका, रुस र चीनसँग यस विषयमा सबैभन्दा आधुनिक प्रविधि छ । ह्याम्बर्ग विश्वविद्यालयको शान्ति अनुसन्धान र सुरक्षा नीतिको लागि संस्थानमा अनुसन्धान फेलो डा. मारिना फाभारोले बिबिसीसँग भनेकी छन् :
विश्वका ठूला शक्तिहरू सैन्य प्रविधिको मामिलामा एक अर्काभन्दा अगाडि रहन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जति छिटो क्षेप्यास्त्र हुन्छ, त्यति नै राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । हतियार पनि देशको इज्जतको प्रश्न बन्न पुग्छ । यी देशहरूले प्रयोग गर्न चाहेकाले राम्रो हतियार बनाउँदैछन् भन्ने होइन । यसको अर्थ चीनले हालै गरेको प्रक्षेपण प्रविधिको मामिलामा अमेरिकासँग बराबरी रहेको देखाउने प्रयास हो । अमेरिकाले भविष्यमा सम्भावित खतराहरू कम गर्न र आवश्यक परे प्रतिआक्रमण गर्न हाइपरसोनिक प्रविधिमा काम गरिरहेको भन्दै आएको छ ।
धेरै नेताहरू रुस र चीनले त्यस्ता हतियारहरू बनाउँदैछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छन्, त्यसैले अमेरिकालाई यसो गर्न राजनीतिक रुपमा पनि आवश्यक छ । हेर्ने हो भने हतियारको दौड यस्तो छ, एउटाले बनाएको प्रविधि, अर्कोले उस्तै वा राम्रो गर्न खोज्छ । अमेरिकाले हाइपरसोनिक प्रविधिमा काम गर्नुको ठूलो कारण रुस र चीनले हाइपरसोनिक प्रबिधिमा काम गरिरहनु हो ।
शीतयुद्धका बेला अमेरिका र सोभियत संघले आणविक हतियार बनाए तर एकअर्काविरुद्ध प्रयोग गरेनन् । यस्ता हतियार प्रयोग गर्नेले पनि परिणाम भोग्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । पारस्परिक हानिको यो सिद्धान्तले देशहरूलाई एकअर्कालाई आक्रमण गर्नबाट रोक्छ र सन्तुलन कायम राख्छ । रुस र चीनले हाइपरसोनिक प्रविधि बनाउनुको कारण यही हो । युद्धको अवस्था आएमा परम्परागत क्षेप्यास्त्र आक्रमणलाई विफल पार्न अमेरिकी प्रतिरक्षा प्रणाली उनीहरूभन्दा राम्रो रहेको उनीहरुलाई चिन्ता छ ।
डा. मारिना भन्छिन्, "जब हामी आपसी हानिको सिद्धान्तको कुरा गर्छौं, हामी रणनीतिक स्थायित्वको पनि कुरा गर्छौं । यदि अमेरिका चिनियाँ र रुसी मिसाइल आक्रमणबाट अभेद्य रह्यो भने, यसको अर्थ अमेरिकालाई नोक्सान नहोस् भन्ने हो तर चीन र रुसका लागि खतरा हुनेछ ।
अहिले रुस र चीनले अमेरिकाको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बढाइचढाइ गरेको हुनसक्ने पनि बताइएको छ । यो पनि सम्भव छ कि यस कारणले गर्दा चीनले हाइपरसोनिक प्रविधि प्रदर्शन गरेको हो । यद्यपि चीनले अहिलेसम्म आफ्नो परीक्षणबारे धेरै जानकारी दिएको छैन ।
कूटनीति, तनाव र हतियार
शीतयुद्धको समयमा अमेरिका र सोभियत संघबीच आणविक आक्रमणको जोखिम कम गर्नका लागि धेरै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । यीमध्ये अधिकांश सम्झौताको म्याद सकिएको छ र अन्तिम सम्झौताको म्याद २०२६ मा सकिँदैछ। तर चीनसँग अमेरिकाको त्यस्तो कुनै सम्झौता छैन । विज्ञहरुले हाइपरसोनिक मिसाइलहरूले प्रभावकारी रूपमा देशहरू बीचको तनाव बढाउने बताएका छन् ।
अहिले अमेरिका र चीनलाई युद्धतर्फ धकेल्नुको सट्टा नयाँ मिसाइल प्रविधिले उनीहरुबीचको तनावलाई गहिरो बनाउँदै लगेको छ । तर यो अवस्था परिवर्तन हुन सक्छ । यदि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलोजी भएका सेनाहरू अन्य देशको सिमाना नजिक तैनाथ गरियो भने चिन्ता बढ्ने छ । त्यसो गर्दा मात्रै अर्को देश त्रसित हुनेछ । आक्रमणको आशमा पहल गर्न पनि सक्छ । त्यसैले प्रायः यो धम्की जस्तै हो र आक्रमण गर्नु जस्तो होइन ।
चीन र रुसले हाइपरसोनिक हतियार बनाउनुको कारण दुवैले अमेरिकी मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली निकै बलियो भएको महसुस गरेका छन् । तर के अमेरिकाले तिनीहरूलाई रोक्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । यदि अमेरिका आफ्नो रक्षा प्रणालीको बारेमा कुरा गर्न र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली जडानमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा पुन: सामेल हुन तयार छ भने, रुस र चीनले पनि हाइपरसोनिक हतियारमा लगाम लगाउन सक्छन् । तर यो कुरालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूले बनाइएको छ ताकि तिनीहरू प्रतिरक्षा प्रणालीमा प्रवेश गर्न सकून् ।
अर्कोतर्फ अमेरिका आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीको बारेमा छलफल गर्न चाहँदैन । यो हतियारको दौड रोक्नको लागि प्रभावकारी तरिका हुन सक्छ, तर राजनीतिक कारणले त्यस्तो हुने छैन ।
हाइपरसोनिक मिसाइलहरू किन चिन्ताको कारण हुन् ?
यी विशेष प्रकारका मिसाइलहरू अन्य मिसाइलहरूको तुलनामा आफ्नो गति नियन्त्रण गर्न र बाटो परिवर्तन गर्न सक्षम छन् । तिनीहरू परम्परागत क्रूज मिसाइलहरूको तुलनामा धेरै उच्च गतिमा दौडन्छन् ।
धेरै मानिसहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू दुश्मनको आँखाबाट लुकाउन र ठूलो खतरा बन्न सक्छन् । चीन र अमेरिकाबीचको तनाव पहिले नै चरम सीमामा छ र यी मिसाइलहरूले तनावलाई गहिरो बनाउँदै लगेका छन् । तर न त प्रविधि अन्तिम हुन्छ न दौड कहिल्यै अन्त्य हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विश्वका ठूला शक्तिहरूले द्वन्द्वको सम्भावना रहेको अवस्थाबाट बच्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ ।
(बिबिसीसहित अन्य एजेन्सीको सहयोगमा)
गुगल र माइकोसफ्टका सीइओलाई भारतमा पद्म भूषण सम्मान
काठमाडौँ । भारतले विश्व प्रसिद्ध सर्च इन्जिन गुगलका सीइओ सुन्दर पिचाई र माइक्रोसफ्टका कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीइओ सत्य नाडेलालाई पद्म भूषणले सम्मान गरेको छ । पद्म भूषण भारत रत्न र पद्म
कुन ओटीटी प्लेटफर्म कति लोकप्रिय ?
काठमाडौँ । विशेष गरि कोरोना महामारी शुरु भएपछि मनोरन्जन क्षेत्रमा ठुलो उथलपुथल भएको छ । सिनेमा हलमा गएर सिनेमा हेर्न तरिकालाई कोरोनाका करण भएको लकडाउनपछि अब बदलिएको छ । यस
मानव दिमागमा ‘चिप’ लगाउने तयारीमा अर्बपति एलन मस्क !
काठमाडौं । संसारका सर्वाधिक धनी एलन मस्कको मानव दिमागमा लगाउने चिप बनाउने स्टार्टअप न्युरालिंकले चाँडै नै परीक्षण आरम्भ गर्ने भएको छ । उक्त चिपको सहयोगमा प्यारालाइसिसका बिरामीले आफ्नो दिमागले भन्दा
फाइभजी नेटवर्कबाट विमानको उडानलाई कस्तो खतरा छ ?
काठमाडौँ । अमेरिकामा नयाँ ५ जी सर्भिस विमान चालक र विमान कम्पनीहरुलाई मुश्किलको विषय बनेको छ । विश्वका धेरै देशहरूले अमेरिकाबाट आउने-जाने हजारौं उडान ५ जी सर्भिसका कारण प्रभावित भएका
खल्ती ५ औं वर्षमा प्रवेश
नेपालमा २४ घण्टामा ८ हजार ४५४ संक्रमित थपिए, ५ जनाको मृत्यु
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित १८ जनाविरुद्ध सवा अर्ब भष्टाचारको मुद्दा
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारनै तिनै तहको निर्वाचन हुन्छ- प्रवक्ता कार्की
बागमतीमा ३४३ जनाले गरे मतदान, विवेकशीलका तीन जनाले गरेनन् मतदान
मधेश प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको मतदान सकियो, मतगणना हुँदै
लुम्बिनीमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतगणना सुरु
डा. बाबुराम भट्टराईलाई कोरोना संक्रमण
मन्त्रिपरिषदको बैठकले के के निर्णय गर्यो ?
राष्ट्रियसभाको सबै सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी हुन्छन्- अध्यक्ष नेपाल
सूचना विभाग दर्ता न: ३४२/०७३-७४
Online User Guideline
© 2020 kharibot Media Pvt. Ltd.. All Rights Reserved. Website By: i-Tech Nepal | Powered By : Hamro.Cloud